ပေါင်အတွင်းသားတွေကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေးဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း | CosmeticMyanmar
Home » Article » ပေါင်အတွင်းသားတွေကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေးဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
ပေါင်အတွင်းသားတွေကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေးဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
မြန်မာမိန်းကလေးတွေက ပေါင်တွေ, ခြေသလုံးတွေဆိုရင် နည်းနည်းတုတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ အကုန်လုံးကိုမဆိုလိုပါဘူးနော်။ တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေကတော့ ခြေတံသွယ်သွယ်လေးတွေရှိကြပါတယ်။ အဓိကပြဿနာကအဲ့မှာစတာ။ ဘာလဲဆိုတော့ ပေါင်အတွင်းသားတွေလျော့တိလျော့ရဲဖြစ်ကြပြီးတော့ ကြီးနေကြတာပါ။ အားကစားပုံမှန်လိုက်စားတဲ့သူတွေကတော့ အဆင်ပြေပေမယ့် အားကစားလည်း မလိုက်စားဘူး, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကလည်းနည်းတယ် ကိုယ်ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်တော့ ပေါင်အတွင်းသားတွေက ကြီးနေမှာပါ။ ပေါင်အတွင်းသားကြီးတာက ဘောင်းဘီဝယ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဒုက္ခအရမ်းရောက်ပါတယ်။ ခြေသလုံးတွေအကုန်တော်ပြီးတော့ ပေါင်နေရာရောက်မှ ကျပ်နေတာမျိုးတွေက အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ အဲ့လိုတွေကြောင့် ထားခဲ့ရတဲ့ အဝတ်အစားတွေလည်းများပြီ? နောက်တစ်ခုကတော့ ပေါင်ပွန်းတာပါ။ ပေါင်အတွင်းသားက ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်မရှိတော့ thigh gap ပေါင်နှစ်ခုအကွာအဝေးက အရမ်းနီးနေတာပါ။ အဲ့လိုဆိုတော့ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ ပေါင်တွေပွန်းပြီးတော့ နာကျင်ရတာပေါ့။ ဒီလို ဒုက္ခတွေကင်းဝေးချင်ရင် နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။ ချွေးတွေအများကြီးထွက်ပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်စရာလည်းမလိုသလို ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးရင်ပေါင်အတွင်းသားလေးတွေပါ ဖြူပြီးကြည်လာမှာနော်။ စိတ်ဝင်စားသွားပြီမလား? ပြောပြလိုက်တော့မယ်နော်။
ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာတင် လုပ်လို့ရတော့ ဆိုင်သွားရတဲ့ အချိန်လည်းသက်သာတဲ့အပြင်စိတ်ကြိုက်ပဲလေ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း ငွေသိပ်မကုန်ပဲ အကျိုးရှိတာလေးဆိုတော့ ကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့- ကော်ဖီအကြမ်းမှုန့်, အညိုရောင်သကြား, သံလွင်ဆီ , packing palstic ( အစားစာတွေမှာ အပေါ်က အုပ်ရတဲ့ ပလပ်စတစ်လေးတွေ) လိုအပ်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကလည်း လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
ပြုလုပ်နည်းလေးကတော့ -ခွက်အလွတ်တစ်ခုထဲမှာ ကော်ဖီမှုန့်ကိုထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း, သကြားညို ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း, သံလွင်ဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲလောက်ကို ထည့်ပြီးတာနဲ့ သမသွားအောင်မွှေပေးပါ။ ပြီးရင် အဲ့အရောကို ပေါင်အတွင်းသားတွေကိုသေသေချာချာ နှံ့အောင်လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ အဲ့လိုလိမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ပလပ်စတစ်ကိုပေါင်အတွင်းသားနေရာကို တင်းနေအောင်ဆွဲထုပ်ပေးလိုက်ပါ။ နာရီဝက်လောက်ထားပြီးရေဆေးချလိုက်တာနဲ့ ပြီးပါပြီ။
ကော်ဖီမှာ ကြေးချွတ်ပေးတဲ့အာနိသင်ပါဝင်လို့ ကြေးတွေကိုလည်း ကင်းစင်စေပြီးတော့ သံလွင်ဆီကတော့ အသားရေကိုစိုပြေစေပါတယ်။ သကြားညိုကလည်းအသားရေကိုပွတ်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ ချောမွေ့စေပါတယ်။ ၃ မျိုးလုံးပေါင်းလိုက်တော့ အာလာဒင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးလို့တောင်နာမည်တပ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။
တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့ ပလပ်စတစ်ကို ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ တင်းတင်းလေးဆွဲပေးဖို့ပါပဲ။ ဒါမှအသားကို စည်းထားသလိုဖြစ်စေပြီးတော့ ကျစ်သွားမှာပါ။
ချစ်စရာနာမည်လေးတွေနဲ့ Super Red ရဲ့ မျက်တောင်တုလေးတွေ
Translucent Powder တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ? (အပိုင်း ၁)